पर्वतका सिडीयोले बोलाएको वैठकमा जनप्रतिनिधिद्धारा बहिस्कार गरेपछि………….! - News site from Nepal
पर्वतका सिडीयोले बोलाएको वैठकमा जनप्रतिनिधिद्धारा बहिस्कार गरेपछि………….!
पर्वत– पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आव्हान गरेको बैठक बहिस्कार गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जनप्रतिनिधीलाई हेपाहा व्यवहार गरेको भन्दै कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख देखि वडाका अध्यक्ष समेत रुष्ट छन् । कोभिड १९ को वारेमा छलफलका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी ंकल्पना घिमिरे नेपालले आज बुधबार बिहान ११ ः३० वजे भिडियो कन्फ्रेन्स गर्ने तयारी गरेकी थिईन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अधिकाँश निर्णय आफुखुशी गर्ने, समन्वय गर्दै नगर्ने जनप्रतिनिधीलाई मैले टेर्दिन भन्ने, वडाध्यक्षलाई थुन्दिन सक्छु भन्ने जस्ता अभिव्याक्ति दिने गरेकोले बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको कुश्मा नगरपालिका ११ पकुवाका अध्यक्ष शिव पौडेलले बताए । सिडियो सावको व्यवहार हेपाहा भयो,’ पौडेलले भने,‘ त्यसैले बैठकमा बस्न उचित मानेनौँ । आफु प्रसासनमा तीन ठाउँमा ताला लगाएर बस्ने सिडियोले गाउँ गाउँबाट जनप्रतिनिधीलाई नगरपालिकामा बोलाएर भिडियो कन्फ्रेन्स गर्न उचित नहुने जनप्रतिनिधीहरु बताउँछन् ।
कुश्मा नगरपालिका ८ का अध्यक्ष राजकुमार क्षेत्रीले सबैको सल्लाहले नै बैठक बहिस्कार गरिएको जनाएका छन् । उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्राविधिक समस्याको बारेमा बुझन सक्नुपर्ने क्षेत्रीले बताए । उनले भने, ‘सिडियोले सामाजिक दुरी कायम गरि प्रसासनको हलमै बैठक गरे पनि हुन्थ्यो नत्र नगरपालिकाको सभाहलमा आए पनि हुन्थ्यो ।’ क्षेत्रीले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अरु धेरै कुरामा जनप्रतिनिधीका कुराको वेवास्ता गर्दै आएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री देखि राष्ट्रपति समेत अहिले सामाजिक दुरी कायम गर्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यस्त भैरहेका छन् ।
तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भने जनप्रतिनिधी संग बसेर व्यवहारिक कुरा गर्न नचाहेको कुश्माका जनप्रतिनिधीहरुले बताएका छन् । कुश्मा नगरपालिकाका सबै वडामा ईण्टरनेटको पहुँच नभएपछि वडाअध्यक्षहरु भिडियो कन्फ्रेन्सका लागि नगरपालिकाको कार्यालयमै आउनुपर्छ । क्षेत्रीले भने ,‘सबै संग ल्यापटप समेत छैन । यो अवस्थामा सामाजिक दुरी कायम गर्दै प्रसासनले प्रत्यक्ष संवाद गर्न सक्थ्यो ।’ जनप्रतिनिधी र प्रजिअको बिचमा टकराव देखिँदा कोभिड १९ रोकथाममा समस्या देखिने अनुमान छ ।
कुश्मा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले खुल्ला ठाउँमा निश्चित दुरी कामय हुनेगरी बसेर छलफल गर्न सकिने अवस्था पनि भिडियो कन्फ्रेन्स गर्न सवै साथीहरुलाई प्रविधिको अभाव भएकोले सम्भव नभएको बताए । सिडीओले आफु सुरक्षित रहन खोज्ने तर जनप्रतिनिधिहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर कुरा गर्न खोज्नु अशोभनिय भएको भन्दै आफुहरु वैठकमा सहभागि नभएको उनको भनार्य छ ।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपालले भने बैठक विभिन्न निर्णयहरु गर्दै सम्पन्न भएको दाबि गर्नुभएको छ । प्रशासनले कुश्मा नगरपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिलाई बैठकमा नबोलाएको भन्दै सिमित जनप्रतिनिधिहरुको बिचमा बैठक सम्पन्न भएको घिमिरेको दाबि रहेको छ ।
मालढुंगा –बेनी सडक अबरुद्ध , सडकमा गएको पहिरोमा परि एक महिला घाइते
नेपालमा १ सय ८६ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए